Iingoma eziphezulu zeRestest 2010
by UTim Grierson
Iirekhodi eziLona ziLona ziLona liLona liLona liLona liLona liLona liLona liLona liLona liLona liLwandle
I-Rock ayikho uhlobo oluthile kodwa luninzi, kwaye ezi ngxelo zigqwesileyo zonyaka zibonise ukuxhamla komculo. Jonga ngokuluhlu olu luhlu uze uve owona mhlaba ophezulu kwi-alt-country, indie-rock, pop pop, kunye ne-alt-metal.
Brandon Izimbali - 'Flamingo'
Ifoto: Kevin Winter / Getty Izithombe.
Kwi-albhamu yokuqala ye-albhamu yakhe, uKillers phambi kweBrandon Flowers uye wenza irekhodi ekhumbuzayo kwaye ehluke kakhulu kunomsebenzi weqela lakhe eliqhelekileyo. I-Flamingo ine-Energy Wave entsha kunye ne-pop yee-Killers zokurekhoda, kodwa ngumzamo ovuthiweyo wobubele. Abalandeli bakhe bangadideka ukuba ayinalo i-out-of-gate hits bajwayele kuye, kodwa umonde wakho uya kuvuzwa ngezinye zeengoma zakhe ezicebileyo.
Abaqhubi beeTyente zeTempile - 'Ietempile zeeTekisi
Ifoto ifane neAlantic.
Kwakubonakala kungenakwenzeka ukuba i- Stone Temple abashayeli bee-pilot babeza kuphinda bahlangane emva kweminyaka yobudala. Kodwa kungekhona nje kuphela ukuba bahlanganisana, bafaka i-albhamu evulekileyo. I-Stone Temple Abaqhubi bebhola baphakamisa umdla we-band kwi-style yama-70s-style rock-pop, kunye ne-insanely catchy "Ephakathi kweLines" ekhokelela indlela, irekhodi elitsha libonise ukuba silahlekelwe kangakanani le glam-rockin 'hedonists.
Iminyaka eyi-10 - 'Ukutya iimvube'
Iifoto zenzelwe intlonipho.
Kwi-albhamu yabo engcono, iminyaka eyi-10 ikhupha iilwimi ezilindelekileyo zerwaleni kunye namanani omculo wee-tempo. Kodwa ngoncedo olungundoqo kumvelisi uHoward Benson , le quartet elide ixesha elide libonisa nendlela yokwandisa iingoma zabo. "Musa ukulwa" ngumsindo onomdla kumntu ohamba naye, ngoxa "Wafa eManzini" ngumsindo othukutheleyo ngokunyaniseka kwenkolo. Oko kugcina Ukutya kweeMvuphi bonke kunye kunye nobuchule bokuzithengela, ukubhala ingoma.
Eels - 'Ixesha Lokuphela'
Ifoto ifanelekileyo iVagrant.
U-Eels wangaphambili u-E uye wachitha ezimbini zokugqibela ii-albhamu ezijongene nobunzima bokuthatha uthando oludlulileyo. Kodwa ngokungafani ne- Hombre Lobo ka-2009, i- End Times yinto ephawulekayo, enokuphelelwa lithemba, egcwele iingoma ezixhasayo zixhaswa kuphela nge-spare ye-instrumentation. Ngenxa yoko, Ixesha lokuphela lirekhodi lobusuku obumnyama bomphefumlo xa uhlala wedwa embhedeni uthetha udonga.
Ifoto ifane neKirtland.
Ama-Toadies asebenza kwiingoma zeFeeler ephakathi kwe-'90, kodwa iilebula zabo zazingachukumiswanga, kwaye ke irekhodi lalikhuselekile. Kulo nyaka, ibhendi iphinda ibuye iphinde ibuyele iilayibhile, idibanise ezinye izinto ezintsha endleleni. Ngummangaliso, i-albhamu ayiveki ngexesha, kunokuba ilandele ingqumbo kunye nobungqina esilindele kulolu luhlu lweTexas.
I-Anberlin -'Impawu Yindlela, Ukukhanya Kuyindawo '
Ifoto ifane neRiphabliki ye-Universal.
Ubumnyama Yiyona Ndlela, UkuKhanya Kuyiyo Indawo , u- Anberlin unqwenela kakhulu ukuba ngumkhulu, ugxobhozo lwamatye kwisiqhelo se- U2 . Akunjalo lula, kodwa i-quintet yaseFlorida ipholile isandi sayo kwaye igxile kwiindawo ezinamandla zokufikelela kwiitars. Ngenxa yoko, ubushushu be "Kuma Wolves," ubuhle obunomdla we "Uthobekile," kunye nomoya onothando ophezulu othi "Wena Ulapha" bonke basebenzisana ndawonye ukuze babambe iqela eliye lazi kakuhle ubugcisa bokudibanisa iinjongo zobuntliziyo ngokunyanisekileyo, emoyeni.
Ibutho lamaHors - 'iArms Infinite'
Ifoto ifaneka uBrown / Fat Possum / Columbia Records.
Kwi-albhamu yabo yesithathu, iHund of Horses ifanqa iifom zabo kwi-randsy-rock rock and ballads. Njengomthunzi nokumema njengoko isihloko salo sicacisa, i- Infinite Arms ingxelo epheleleyo yokusalela kusasa echithwa ngokucinga ngezinto ezithandwayo zangaphambili kunye nokuzisola ngokuzithemba, kodwa iingoma ezinamandla zikaBen Bridwell zikhona ukuze zikhethwe ukuze ungabi phantsi.
I-Hole - 'Akukho ndoda'
Ifoto: Vittorio Zunino Celotto / Getty Izithombe.
Kwiitshathi, i-albhamu ye-Courtney Love ye-albhamu yokubuya ingaba yinto encinci, kodwa kwiNkokheli yoMntu ka -Queen of Hole ibuyele ekunyanisekeni kokunyaniseka kunye nokunyaniseka kwe-al-rock-solid rock of '90s masterwork, Live Through This . Umdala kodwa engengqiqo ngakumbi, Uthando luyaqonda ukuba uhlala ehlabathini elilawulwa ngabantu, kwaye nangona engenazo iimpendulo, ubophe kwaye uzimisele ukwenza ingxolo malunga nalo.
Umoya Ofileyo - 'Ulwandle lweCowards'
Ifoto ngokukhawuleza Umntu wesithathu / Inkcazelo apha.
Ulwandle lweCowards luqhubeka lulolu hlobo olufana ne - albhamu yokuqala ye- Weather Weather , i- Horehound , evelele kwikhono layo ekuqulunqeni izinto ezintle, ezinobuncwane. UJack White no-Alison Mosshart abachitheli esinye sesibini sokukhululwa kwabo ngokuxhalaba ngokukhathazayo. Kunoko, bafuna ukudala i-albhamu egcwele izandi ezimnyama ezibonisa ukuba uxhalaba kunye nevoodoo eyenza ubomi bwanamhlanje buyimfihlelo kwaye buyike.
I-Stone Sour - 'I-Secrecy Audio'
Ifoto ifanelekileyo i-Roadrunner.
Kwi-albhamu yabo yesithathu, isiteleka se-Stone Sour sinomlinganiselo ophezulu phakathi kokufikeleleka kunye nogonyamelo. Amaxwebhu e- Secrecy adibanisa ukuchithwa kwebali elinye lothando kunye nokuqala komnye omtsha: Umculi wengoma uCorey Taylor waqhawula kwaye watshata kwakhona kwiminyaka embalwa edluleyo, kwaye intlungu kunye nokugcoba kwalawo maqabane kuwo wonke irekhodi.
I-Black Rebel Motorcycle Club - 'Shaya uMtyholi weTattoo'
Ifoto enesidima i-Ink Tank.
Le ntanethi yaseSan Francisco iphumelele ngokuziphendukela kwemvelo kwindlela yokusebenza kwayo, igxininise i-albhamu yayo yokuqala ye-albane ye-shoegazer ngeendlela ezingaphezulu zehlabathi. Ekubetheni uMtyholi weTattoo , iKlabhu yaseBlack Rebel Motorcycle Club yanquma ukuphosa ndawonye zonke iimpembelelo zawo, ukuvelisa irekhodi ebalulekileyo kwaye ingxamisekileyo xa ingenayo kwaye iyingozi.
I-Hold Steady - 'Izulu Lihlala Nini'
Kwirekhodi ye-studio ye-Hold Steady yesihlanu, u-frontman uCraig Finn ufikelela kwiindlela zakhe eziqhelekileyo, kodwa kunye neembambano ezimbalwa. Njengamaxesha onke, i-rock-band yakhe yebhanki iyamnandi kwaye iinguqu zakhe ezimfutshane zengoma zi-pitch-ezigqibeleleyo, kodwa isandi seBrooklyn sextet siye sabathandana kwaye sinzima.
AmaKumkani aseLonon - 'Woza NgeZantsi'
Ifoto ifanele iRCA.
Iindonga zaseMzantsi zasemazantsi ulwandle: Oko kukulinganisa ngokukrakra kokokho iiKumkani zaseLeon zenzeke kwi- Come Around Around , ukuzithemba, ukulandelelana okuphucukileyo kwi-albhamu ye-band, kuphela ngobusuku . Ngelixa bezama ukuphindaphinda impumelelo yabo ye-albhamu yokugqibela, i-quartet yombili iguqule isandi sayo kwaye iyanamathele kwiingcambu ze-al-rock rock ezixhalabileyo.
Kid Rock - 'Ukuzalwa Kakhululekile'
Njengoko i-albhamu ye-albhamu yerekodi yakhe yakamuva ibonisa, i- Kid Rock ithatha lula kwaye ingavumeli izinto ziyikhathaze kakhulu kwi- Born Free , inzame yakhe yokumemeza kunye nokubuya. Ngeendwendwe ezivela eSheryl Crow ukuya kwi- TI , Born Free ifumana iDwala efuna iimpawu zethemba phakathi kweendaba ezimbi namhlanje. Impendulo yakhe kwimfazwe kunye nokunciphisa iimboli ezilungileyo, kwaye nangona oko kungenako ukuphilisa izifo zoluntu, yenza ukuba irekhodi elibandakanyekayo.
I-Drive-By Truckers - 'Into Enkulu Yokuyenza'
Ifoto ifanele i-ATO.
I-Smart, inzima, ichukumisa kwaye iluhlaza, i-Drive-By Truckers ' Enkulu Kuyenzayo i-albhamu epheleleyo yexesha lethu elide lokubuyisela. Le sextet yaseGeorgia idibanisa i-arna-rock, i-alt-country, kunye ne-indie-rock ibe yintonga ebomvu ngenxa yeengoma malunga nemibhobho yokudlala, imisebenzi embi, ukubulala kunye neentlungu ezibuhlungu ezenza ubomi obuninzi bemihla ngemihla.
Deftones - 'I-Diamond Eyes'
Ifoto ngokukhawuleza Phindela.
Ngaba ibhanti ye -alt-metal ingaba ngezwi lokuduma, imvakalelo embi kunye neyokuqala ngokukhawuleza? Ukuba loo bhanti yiDeftones , ngokuqinisekileyo. Uphefumlelwe ngengozi yemoto yaseChi Cheng yonyaka ka-2008, eyamshiya kwi- coma , i-quintet yaseCalifornia iye yakhiqiza irekhodi yayo ecacileyo kunye ne-muscular, enye ehambisa zonke iindawo eziphakamileyo kunye nobomi bodwa. I-Diamond Amehlo yavela ngenxa yentlekele, kodwa iDeftones yacinga indlela yokwenza umculo wokunqoba ngaphandle kwentlungu.
Top 10 Ellie Goulding Iingoma
Top 10 Chris Brown Iingoma
Imfazwe Yemfazwe kaRhulumente
Ziziphi iintlobo zee-Rollerblade Bearings?
Ngaba Unokuthatha i-GED Test Online?
Inyathelo Ngamanyathelo: Ungatshintsha njani i-Oil Engine Yakho yeMoto
Izilwanyana ezili-11 ezinobomi
Imbali yeTeleyishini yeThelevishini kunye noJohn Baird